Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A September 2011 (5)
Q and A September 2011 (5)
၁။ ကိုယ်ဝန်လည်း ဆောင်ထားပါတယ်။
၂။ ကျနော့် ပြဿနာက ဒီလိုပါ။
၃။ I also do appreciate for your articles regarding medical and sex education.
၄။ သားအိမ်ကို ခြစ်ရတာ အကြောင်း ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို
၅။ Miscarriage ဖြစ်ပြီး ဖယ်ထုတ်ထားရပါတယ်။
ကျွန်တော့် ဇနီးသည်ဟာ အသက် ၄ဝ ရှိပါပြီ။ ကိုယ်ဝန်လည်း ဆောင်ထားပါတယ်။ သူအခုပြောနေတာ ခါးအောက်ပိုင်းတွေ ကိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရင် ဆီးစပ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ ကိုယ်ဝန်က ၂ လကျော်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ သူဘယ်လို အစားအသောက်မျိုး စားသင့်တယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
ကိုယ်ဝန် ၂ လမှာ ဆီးစပ်နေရာက နာတာကို စစ်ဆေးသင့်တယ်။ OG နဲ့ ပြနိုင်ရင်ပြပါ။ ဆီးအောင့်လို့ နာတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးလေးသောက်တာနဲ့ ပျောက်မယ်။ လိုအပ်ရင် Ultrasound ရိုက်ခိုင်းမယ်။ ကိုယ်ဝန်က ပုံမှန်နေရာဆိုတာကို သေခြာချင်လို့။ လောလောဆယ် Painkiller တမျိုးမျိုးကို အစာနဲ့ သောက်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော့်အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ ကျနော့် ချစ်သူလည်း ၂၅ နှစ်ပါခင်ဗျာ။ ၁ လ ကိုယ်ဝန်တားစားဆေးတွေကို ရာသီစပေါ်တဲ့နေ့ နဲ့ ပေါ်ပြီး ၅ ရက်အတွင်း စစားရမယ်လို့ဖတ်မိပါတယ်။ စစားတဲ့နေ့ကစပြီး အကာအကွယ်မပါဘဲ အတူနေလို့ရပါလား။ ၁ လ ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးတွေကို ကြားနေ့တွေမှာလည်း စားလို့ရပါသလား။ စားလို့ရရင် စစားတဲ့နေ့ကစပြီး အကာအကွယ်မပါဘဲ အတူနေလို့ရပါလား။ ကျနော့် ပြဿနာက ဒီလိုပါ။ ကျနော့် အိမ်ကလည်းသဘောတူပြီး ကျနော့်ချစ်သူနဲ့ ရက် (့) ခန့် ခရီးတစ်ခုကို ဒီလ (့) ရက်နေ့မှာ စထွက်ရမှာပါဆရာ။ သူ့ရဲ့ရာသီလာတဲ့ရက်က ၆ ရက်နေ့ပါ။ ချစ်သူနဲ့ အတူနေရတဲ့ ရက် ၂ဝ ခန့်အတွင်းမှာ အကာအကွယ်လည်း မသုံးချင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်လည်း မရစေချင်ပါခင်ဗျာ။ အပြင်ကိုလည်း သုက်စွန့်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်း ခက်ခဲပါတယ်ဆရာ။ မည်သည့် နည်းလမ်းနဲ့ မည်သည့် ဆေးဝါးတို့ကို အသုံးပြုရင် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါမည်လဲ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မိန်းကလေးကို အခုကတည်းက တနေ့ ၁ လုံး၊ ၂၁-၂၈ ရက်သောက်ရမဲ့ဆေး သောက်စေပါ။ ဒီကနေ့က ၈ ရက်ဖြစ်လို့ နောက်မကျပါ။ ရာသီလာပြီးလဲ အတူနေဖြစ်မယ်ဆိုရင် အခုဆေးကပ်အပြီး နောက်လအတွက် ရာသီလာမယ်။ ရာသီလာတဲ့ရက်ကနေစပြီး ဆေးကပ်သစ် သောက်ပါ။ ၂၁-၂၈ လုံးဆေးကပ်တွေ အတူတူပါဘဲ။ အရောင်ဖြူ-အရောင်နု ၂၁ လုံးကသာ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါတယ်။ အရောင်ရင့်ဆေး သောက်နေရင်း ရာသီလာတယ်ဆိုရင် အဒီအရင့်ကို ဆက်မသောက်တော့ဘဲ ဆေးကပ်သစ်က အရောင်နုဆေး စသောက်စေပါ။ ခရီးပြန်လာလို့ အတူမနေဖြစ်လဲ ဆေးကပ်ကုန်အောင် ဆက်သောက်စေပါ။ ရပ်လိုက်ရင် သွေးပြန်လာလို့ ရက် ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားမယ်။
ဆရာ့စာကို ၁၂ ရက်နေ့မှာ ဖတ်ရပါတယ်ခင်။ ကျနော်တို့ မြို့မှာက အင်တာနက်လိုင်းကျသွားပြီး ဒီနေ့မှ ပြန်ရလို့လို့ စာမပြန်ဖြစ်တာ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျား။ ၁၂ ရက်နေ့မှာပဲ Marvelon 28 ဆိုတဲ့ဆေးကို သောက်စေပါတယ်။ ရာသီလာပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့ပါ။ ကျနော်တို့က ၁၉ ရက်နေ့မှာ အတူနေမယ်ဆိုရင် အကာအကွယ်မပါဘဲ အတူနေလို့ရပါပြီလား။ မိန်းကလေးက ဆေးသောက်နေတာ ခေါင်းမူးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နဲနဲမူးချင်သလိုလို ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အရမ်းအဆိုးကြီးလဲ မဟုတ်ပါခင်ဗျား။ ဆေးသောက်နေသ၍ အမြဲ ခေါင်း နဲနဲမူးနေမှာလားခ။ ခေါင်းမူးသက်သာအောင် ဘယ်ဆေးတွေနဲ့များ တွဲသောက်ရမှာပါလဲ။ ဆေးကို ည ၈ နာရီမှာသောက်စေပါတယ်။ အဲဒါ မနက်ပိုင်း အားဆေး တစ်မျိူးမျိူး သောက်လို့ရပါလား။
၁။ ပြောတဲ့အတိုင်း ဆေးသောက်ပြီးရင် ပြောတဲ့နေမှာ အကာကွယ်မပါဘဲ အတူနေလို့ရပါပြီ။
၂။ Brand Name ဆေးကုမ္ပဏီပေး နာမည် = Marvelon (မာဘလွန်)၊ Common Name ဆေးနာမည် = desogestrel - ethinyl estradiol ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ အောက်ကရေးတဲ့ side effects ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကို ဆေးသောက်သူ ၁% မှာ ခံစားရတယ်။
• abdominal cramping or bloating ဗိုက်နာ၊ ဗိုက်ကယ်၊
• breast pain, tenderness, or swelling ရင်သား နာ-ရောင်-တင်း၊
• brown, blotchy spots on exposed skin နေရောင်တွေ့တဲ့ အရေပြားမှာ အညိုပြောက်ဖြစ်၊
• gain or loss of body or facial hair ကိုယ်မွှေး ပိုပေါက်-ပိုနည်း၊
• increased or decreased interest in sexual intercourse လိင်စိတ် နည်း-များ၊
• increased sensitivity of skin to sunlight နေရာင်ကို သိပ်မခံနိုင်၊
• swelling of ankles and feet ခြေခြင်းဝတ်ရောင်၊
• unusual tiredness or weakness မောပန်း-အားယုတ်၊
• weight gain or loss ကိုယ်အလေးချိန် နည်း-များ၊
• ပိုပြီးရှားပါးတဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုကျိုးများ၊
• breast lumps ရင်သားအကျိတ်၊
• breakthrough bleeding or spotting between periods ကြားရက်သွေးဆင်း၊
• complete stop of menstrual bleeding for several months ရာသီမလာဘဲနေ၊
• decreased bleeding during periods ရာသီသွေးအဆင်း နည်း-များ၊
• mild increase of blood sugar ဆီးချိုရှိနေသူ ဆီးချိုတက်၊
• headaches or migraines ခေါင်းကိုက်၊ (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းမူး-ကိုက်ဖြစ်၊
• increased blood pressure သွေးဖိအားတက်၊
• swelling, pain, or tenderness in upper abdominal area ဗိုက်အထက်ပိုင်နေရာ ရောင်-နာ-တင်း၊
• vaginal infection မွေးလမ်းပိုးဝင်၊ အဖြူဆင်း၊
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ အလွန်ပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒီ Marvelon 28 ဆေးသောက်နေရင်းနဲ့ Oramin F လိုမျိုး အားဆေးကို မနက်ပိုင်းမှာသောက်လို့ရပါလားဆရာ။
Oramin-F ဆေးဟာ ကိုရီးယား-တိုင်းရင်းဆေး အားဆေးတမျိုး ဖြစ်တယ်။ ကြော်ညာအရ ဗီတာမင် အေ၊ ဘီ ၁၊ ဘီ ၂၊ ဘီ ၆၊ စီ၊ ဒီ နဲ့ အီး ပါတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ အားယုတ်နေသူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ စတာတွေအတွက် ညွှန်းထားတယ်။
Mon, Sep 12, 2011 at 6:25 PM, Facebook
I'd like to thank you for your contribution to Burmese democracy and human right cause. I also do appreciate for your articles regarding medical and sex education. I'll be great honoured to be your friend on FB.
My experience asagovernment medical officer for 15 years inside Burma taught me health education isadifficult task. So I am writing just medical articles which are not similar to conventional health education. My target audience includes patients who suffer and medical folks who help others. It isasort of sharing knowledge.
Second, I don't mean sex education indeed. Reproductive structure is one of human's systems. A general practitioner has to deal with from head to toe. Sexual relation isafundamental part of human life. Unfortunately for Burmese it is still taboo to talk about. I rather like to be called adult medical education. Even then I refrain from using “adult” adjective as it is dirty in many others' eyes. So I go for “over-18 readings”. I provide merely professional information.
Third, being an NLD I want to help Burmese wherever they are. Then I openedafree clinic where all comers are free to seek my expertise. Meanwhile I train volunteers. Then I created an online clinic where I try to answer all health related questions. However I am not treating them as I can't see and examine them. It is up to an individual to follow or just to forget it.
My work is not based on NGO proposal because I wanted to change some of my fellow activists who come around when fund was made available and go away if there is no money. I try to set an example of do what ought to be done for the community without relying on NGOs. If you doagood job supporters will come after you.
Yet my hands are too short.
September 21, 2011 4:13 AM
ဆရာ သားအိမ်ကို ခြစ်ရတာ အကြောင်း ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို သိခွင့်လေးများရှိရင် ပြောပြပေးနိုင်မလားရှင့်။ ပြီးတော့ ဘာလို့ခြစ်ချရတာလဲ ဆိုတာကိုပါ သိချင်ပါတယ် ဆရာ။
D&C Dilation and Curettage သားအိမ်ခြစ်ခြင်း ဆိုတာကျု Abnormal uterine bleeding အမျိုးသမီးတွေ မွေးလမ်း (သားအိမ်) ကနေ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းတာအတွက် Diagnosis ရောဂါရှဖွေဘို့ နဲ့ Treatment ရောဂါကုသဘို့ရာ လုပ်ပေးပါတယ်။ Abortion/Miscarrage ကိုယ်ဝန်ပျက်တာနဲ့ Uterine cancer သားအိမ်ကင်ဆာ သံသယရှိတာတွေအတွက် လုပ်ရတာများပါတယ်။
သမီးက (့) မှာနေပါတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ Miscarriage ဖြစ်ပြီး ဖယ်ထုတ်ထားရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ၆ ပတ်မြောက်မှာ OG နဲ့ Ultrasound ရိုက်ကြည့်တော့ ကလေးကအထဲမှာ နှလုံးမခုန် လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အတွက် တပတ်ဆေးစား စောင့်ကြည့်ပြီး ဖယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး ဘာတားဆေး ဘာဆိုဘာမှ မသုံးပါဘူး။ ၂ ပတ် အကြာမှာ ဆရာဝန်က စမ်းသပ်ပြီး အားလုံး OK ပါတဲ့။ အခုဆို တလနီးပါးရှိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခု သားအိမ်နေရာက ကျိန်းအောင့်အောင့်ကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ အခု အသက် ၃၅ ရှိပါပြီ။ စိတ်ထဲမှာ နောက်ထပ်ကလေး မရတော့မှာ၊ ကိုယ်မကျန်းမာမှာ စိုးပါတယ်။ လေးရက်လောက် နားပြီး အလုပ်ပြန်ဆင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီအလုပ်ကြောင့် ဒဏ်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်နဲ့ နောက်ထပ် အောင်မြင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ရရှိနိုင်ဖို့ ကျန်းမာစွာနေနိုင်ဖို့ စပ်လျဉ်းမဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေပါ တဆက်တည်း ဖော်ပြပေးပါ။
D and C သားအိမ်ခြစ်တာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့ကို စုပ်တုတ်ယူနည်းလုပ်တယ်။ ဘယ်နည်းဖြစ်ဖြစ် ခွဲစိတ်မှုတမျိုးမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖြစ်နေတဲ့ သားအိမ်နေရာမှာ ခံစားနေရတာအပြင် ဆီးအောင့်တာ၊ အဖြူဆင်းတာ ဖြစ်သေးလး။ ဘယ်လိုနေရင် ပိုခံစားရသလဲ။ ဥပမာ ဆီးသွားတဲ့အခါ၊ ဖိနှိပ်ကြည့်တဲ့အခါ။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ၊ အတူနေတဲ့အခါ။
မေးတာတွေ မသိရခင် ပြောရရင် Painkiller တခုခုသောက်နိုင်ပါတယ် ဥပမာ Ibuprofen နဲ့ Diclofenic တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂-၃-၄ ကြိမ်၊ အစာနဲ့သောက်ပါ။
တခါကိုယ်ဝန်ပျက်တိုင်း နောက်မပျက်သူအလွန်များပါတယ်။ နောင် ဆင်ခြင်ဘို့ဆိုတာလဲ သိပ်တော့ အထူးမှာစရာတော့မရှိပါ။ ပျက်ချင်ပျက်သွားတတ်တာက ပိုများလို့ အလုပ်အကိုင်၊ အနေအထိုင်ကြောင့် မပျက်တတ်ပါ။
ပုံမှန် အစားအသောက်၊ သက်သာတဲ့အလုပ်အကိုင်၊ သံဓါတ်၊ ဖေါလစ်အက်စစ်၊ ဗီတာမင် ဘီ အုပ်စုတွေသောက်သင့်တယ်။ စိတ်ဓါတ်ကိုလဲ ခိုင်မာ၊ ကြည်လင်နေသင့်တယ်။ အကောင်းဘက်ရှုမြင်တာ လုပ်သင့်တယ်။
ကိုယ်ဝန်အကြောင်းတွေ အများကြီးရေးထားပါတယ်။ http://www.yamunaclinic.org/ က Search မှာ ရှာနိုင်ပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:10 AM